ယခုကြှနျုပျတို့ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အစုဆောင်းနေကြသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနိုင် သင်သည်သင်၏အလုပ်ရှာဖွေအောင်မြင်မှုရောက်ရှိရန်ကူညီ။ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအရပြည်တော်ပြန်ကူညီပေးနေဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ။ အဆိုပါမေးခွန်းဖြစ်ပါသည် တကယ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လို။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သင်အမှန်တကယ်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှအနည်းငယ်ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လူတွေစီးပွားရေးအာရပ်မြို့တော်စဉ်းစားတဲ့အခါ။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီဤလောကသို့ကွှလာကြပါပြီ။ ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများအလိုအလြောကျလင့်ထားသည် ဒူဘိုင်းမြို့အခွန်လွတ်လုပ်ခအကြောင်းပြောဆို။ ဒူဘိုင်းက၎င်း၏နီယွန်မီးလုံးများနှင့်တိုးတက်နေတဲ့ မြင့်မားသောကော်ပိုရိတ်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ party ဖို့ဘယ်လိုအခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီလူသိများ။ ဒါကြောင့်သင်သင့် hard-ရရှိခဲ့သည်ပိုက်ဆံဖြုန်းဘယ်မှာစိုးရိမ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
သငျသညျယေဘုယျအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှုဆောင်အရာရှိအလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ်ကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သင်သေချာပေါက်ကိုအကောင်းဆုံးထွက်ရှာရန်လိုအပ်ပါတယ် ထိုကဲ့သို့သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေလှုပ်ရှားမှုများအဘို့အဦးတည်ရာ။ တကယ်တော့သင်ကလူကြိုက်များအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များကိုကြည့်ရှုလျှင်။ ဒူဘိုင်းမြို့ ဆောင်းပါးများရှာဖွေနေအလုပ်အကိုင်များများနှင့်အတူကုမ္ပဏီအမြဲတမ်းစာရင်းတွင်ပထမဦးဆုံး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ် site ကိုအောင်အများအပြားတည်နေရာကနေကျွမ်းကျင်သူများရှိခြင်းနေကြသည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ပင်အမြဲနံပါတ်တစ်ခဲ့ အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့။ ကုမ္ပဏီအများအပြားဌာနမှူးရုံးများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာအဘူဒါဘီမှ like နှိပ်။ အခြားသောလမ်းအဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်တစ်ခုဆိုတော့သူကထားသောအကောင်းဆုံးအရာပါပဲ ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသင်ဖွစျနိုငျ.
ခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်, ထိုစည်းမျဉ်းအဲဒီမှာအတွက် အရှေ့အလယ်ပိုင်းကွဲပြားခြားနားကြသည် ဥရောပနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရန်။ နိုင်ငံတကာအလုပ်များ မင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုနိုင်ငံခြားကိုရောက်လိမ့်မယ်၊ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာမင့် ဒါပေမယ့်သင်ဆဲကောင်းသောလုပ်ခလစာရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါတယ်မဆိုလိုပါ။ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီလန်ဒန်သို့မဟုတ်ပဲရစ်ထက်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ဤမျှလောက်ရှိပါတယ် အာရှကနေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ။ အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်ကနေ။
၏သင်တန်းမဟုတ်ဘဲလူတိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေဘို့ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီသွားရောက်နိုင်ခဲ့သည်။ မိမိတို့ပြည်ကနေအလုပ်အကိုင်အများအတွက်လျှောက်ထားမယ်လို့ဒီတော့အလုပ်ရှာဖွေသူများ။ သို့သော်ဝမ်းနည်းစွာပု စော်ဘွားကူးလာရန်ကုန်ကျစရိတ် ကကြီးမားသည်။ အုပ်ချုပ်ရေး အိန္ဒိယနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ကာတာကနေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ မကြာခဏကျော်ပျံသန်းဖို့အလုပ်ရှာဖွေသူများကိုတားဆီး။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလဒူဘိုင်းဟာဇိမ်ခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းထက်ပိုသည်ကရင်ဆိုင်ဖို့ကြကုန်အံ့။
အလုပ်ရှာဖွေသူများဖြစ်ကြောင်းအရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား ဒူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်အပူတပြင်း။ အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းဟာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်စူပါစျေးကြီးသည်ရိုးရိုးပါပဲ။ သငျသညျစော်ဘွားတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်နိုင်ရန်ကြိုးစားတဲ့အခါအချို့ကိုသင်ငွေစုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုအခါကြီးမားသောကွာခြားချက်လန်ဒန်နှင့်ပဲရစ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ သင်အလွယ်တကူ 1-3 လအတွင်းအလုပ်ရနိုင်။ သို့သျောလညျး, ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ကြောင့်6လအထိကြာပါလိမ့်မယ်။
အရှေ့အလယျပိုငျးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အတပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအ 2019 အတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့ဤလူကြိုက်များဟော့စပေါ့။ သူတို့အခွအေနမြေိုးကိုသင်အမြဲလုပ်နိုင် အွန်လိုင်းမှအလုပ်ဆိုက်နှင့်မှတ်ပုံတင်ရန် သှေးဆောငျဒူဘိုင်းအားလုံးဧည့်သည်များကတိပေးထားတယ်ကြောင်းဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီကဲ့သို့သော။ ယူအေအီးကူးလာတဲ့သူတွေ အဆိုပါအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးများ၏အန္တရာယ်မသိရပါဘူး။
ဒေသခံများသည်သင်စဉ်းစားစေခြင်းငှါသင်တို့သိရ ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်စတင်ရန် တစ်ဦးအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်ဒါပေမဲ့ဒီတရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျငွေဘယ်လောက်လုပ်နေပါတယ်နေပါစေ။ သငျသညျအဘူဒါဘီငှါလာကြသောအခါကမလုံလောကျပါလိမ့်မယ်။ အများဆုံး ကျွမ်းကျင်သူများ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်ဆင်းရဲသားအစားထိုးဖြစ်လာသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းဖို့မကြိုးစားနဲ့ သငျသညျဒူဘိုင်းမှမရောက်မှီရှည်လျားစျေးကွက်များအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပွငျဆငျ.
ဦးဆောင်အလုပ်အကိုင်များတွင်ကျယ်စွာအားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်စစ်တမ်းတုံ့ပြန်၏ 45.5% အလိုအရ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကုမ္ပဏီများမှ။ အမြဲတမ်းပင်သစ်ကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှတောင်းဆိုမတိုင်မီနက်ရှိုင်းသောသုတေသနလုပ်နေတာ။ ်ထမ်းခေါ်ယူမှုမန်နေဂျာအမြဲလူမှုရေး profile များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ငှားရမ်းမတိုင်မီအွန်လိုင်းသစ်ကိုငှါး လုပ်. ရသမျှစစ်ဆေးနေ။ ယခုကြှနျုပျတို့ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အစုဆောင်းနေကြသည် ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းကြပါဘူး။
အချို့ကိစ္စများတွင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာစော်ဘွားရှာဖွေစုဆောင်း အွန်လိုင်းအလုပ်လျှောက်လွှာပုံစံများကိုတောင်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်, linkedin နှင့် Facebook စစ်ဆေးနေအဖွဲ့အစည်းများ၏စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရေအတွက်ကစကားပြော။ ဒါ့အပြင်ယခင်အလုပ်ရှင်များက web address ကိုစစ်ဆေးနေ။ တော်တော်များများနှင့်လူမှုမီဒီယာကွန်ရက်များအတွက်ကုမ္ပဏီများနှင့် LinkedIn တို့ပရိုဖိုင်းကိုမှ အများဆုံးဖြစ်နိုင်သောသတင်းအချက်အလက်အကဲဖြတ်ရန် လက်ရှိကိုယ်စားလှယ်လောင်းအကြောင်းကို။
ရေရှည်, သင့်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကျိန်းသေ check လုပ်ထားပါလိမ့်မည် နောက်ဆုံးပေါ်အလုပ်ရှင်ထံမှအပေါငျးတို့သညျညှနျးအတူပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဘို့, အလုပ်နှင့်ကုမ္ပဏီများကော်ပိုရေးရှင်းပေးထား ယဉ်ကျေးမှုအရေးကြီးလှသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်ယူအေအီးအတွက်သင်၏အွန်လိုင်းမြင်သာတိုးမြှင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသင်၏အွန်လိုင်းဂုဏ်သတင်းကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ရန်ကြိုးစားနေ သင့်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အွန်လိုင်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်သင်အလုပ်တစ်ခုဆင်းသက်အပြုသဘောဆောင်သောပုံရိပ်ကိုအကူအညီနဲ့တည်ဆောက်.
2018 အတွက်ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်များအတွက်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းနဲ့ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီဖို့ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload တင်ကြဘူး။ ကြှနျုပျတို့မှာ အိန္ဒိယကနေအလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေ, ပါကစ္စတန်, ဆော်ဒီအာရေဗျ, UKနှင့်ကာတာနိုင်ငံ။ သငျသညျရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေတစ်ဦးအမြန်ဖြေရှင်းချက်များအတွက်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယခုကြှနျုပျတို့ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အစုဆောင်းနေကြသည်။ ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်းအတူလုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ဘယ်မှာအဘူဒါဘီအတွက် HR ကုမ္ပဏီများမှ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အအလုပ်အကိုင်အကူအညီစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, သင်ဒူဘိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ upload ရန်လိုအပ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းရှိအခြားအလုပ်ဆိုက်များ CV ကို။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်စီမံခန့်ခွဲသင့်တယ်ဘယ်မှာထိပ်က်ဘ်ဆိုက်များအချို့ရှိပါသည်။ အားလုံးကြိုးစားကျော်ကနေနယူးကျွမ်းကျင်သူများ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကျနော်တို့လုပ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးနေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါတို့သည်ငါတို့၏ website တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုလောကအတွက်နေကြသည်။ ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ by အလုပ်ရှာဖွေသူများကိုမိုဘိုင်းသုံးပြီးနှင့်အလုပ်လျှောက်ထား။ သင်သည်သင်၏ပြောင်းရွှေ့စေမတိုင်မီဒါနှစ်ကြိမ်ထင်ပါတယ်။
2018 နှင့် 2019 ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည် ဖိလစျအတှကျအဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်။ ဒီတိုင်းပြည်ထဲကနေလျှင်ဒါသငျသညျကျိန်းသေကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကအဲဒီနိုင်ငံတွေမှာကနေနေ့စဉ်လူတွေကိုအားမရဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားငှားရမ်းကုမ္ပဏီများသည်ကိုကြည့်ပါ။ ဤ ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း site ကို ဤ ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့ပေါ်တယ်ငှားရမ်း။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးသည်သင်၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
2018 နှင့် 2019 အတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများအများစုယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့ရှာဖွေ။ သူတို့ထဲကတချို့ကကိုယ့်ဧည့်သည်အဖြစ်ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီမှလာမယ့်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းမ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီဖို့ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သင်သည်သင်၏ပစ်မှတ်ရောက်ရှိရန်ကူညီပေးဖို့အရပျ၌အစဉ်အမြဲဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့အဘယ်သူမျှမကိစ္စသငျသညျကြှနျုပျတို့ထံမှများမှာ အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေ, ပါကစ္စတန်ပြည်တော်ပြန်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးယူအေအီးအတွက်ပျော်ရွှင်ဝန်ထမ်းဖြစ်တောင်အာဖရိက။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျနော်တို့လုပ်နိုင်သကဲ့သို့လူများစွာအထောက်အကူပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပါကစ္စတန်အလုပျသမား၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ ယူအေအီးအတွက်အကြီးမြတ်ဆုံး။ သူတို့ကအစသူတို့ကသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံတွင်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများအများကြီးရှိခြင်းနေကြတယ်, စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းအများကြီးကိုငါသိ၏။ ဥပမာအားဖြင့်, ပါကစ္စတန်ရှိကျောင်းများအားလုံးများမှာ မွတ်စလင်များနှင့်သူတို့ကယူအေအီးကဲ့သို့တူညီသောယဉ်ကျေးမှုကိုစီမံခန့်ခွဲနေကြ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်နေ့စဉ် CV ကိုဖွင့်တွေအများကြီးကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အရာအရပျမြားနှငျ့စုဆောင်းရေး။ သို့သော်ငြားလည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ် ယူအေအီးအတွက်စူပါလူကြိုက်များကြသည်။ အထူးသဖြင့်ပါကစ္စတန်ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အသင်အမှန်တကယ်ကောင်းသောအလုပ်အခွင့်အလမ်းများရှိနိုင်ပါသည်။
ပါကစ္စတန်ကနေလူများအတွက်ပြီးခဲ့သည့်စကားများဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အကြံပေးကြသည် ဒူဘိုင်းဟိုတယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများရ။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုဒီလိုမျိုးများအတွက်အာကာသတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်, သင်၌နေသောသူတော်တော်များများဟိုတယ်များကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ငှားရမ်း။ ဒီတော့ရှာဖွေနေစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဘယ်တော့မှအဖြစ်သင်တို့အဘို့မဆိုဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ်အရှုံးမပေးနဲ့ စော်ဘွားအတွက်အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူ.
အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေကြသူနိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အများအပြားကောလာဟလများရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်အောက်ပါနှစ်များတွင်တက် 2020 ရန်, ဆော်ဒီအာရေဗျကုမ္ပဏီများမှကိုယ်စားလှယ်လောင်းများငှားရမ်းနေကြ။ အားလုံးနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုကျော်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှနည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ အမှန်တကယ်, ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းမှစုဆောင်းခံရဖို့အမြိုးသမီးတပြည်တော်ပြန်ကူညီပေးနေကြပါသည်။ နှင့်အခြားသောလက်ပေါ်, ငါတို့နိုင်ငံတကာစျေးကွက်အတွက်ဒူဘိုင်းကနေစီမံခန့်ခွဲရသည်။
ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်ကိုမည်သို့၏ဥပမာတစ်ခုမှာအလုပ်အကိုင်များအုပ်စုများသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏အပေါ်အလုပ်အကိုင်ရှာတှေ့နိုငျ ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းရှိကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အလမ်းညွှန်များ သင်သည်သင်၏ updated CV ကို post သို့မဟုတ်ပင်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်မည့်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အများအပြားရွေးချယ်စရာရုံတစျခုစံလမ်းထက်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူကျနော်တို့အများအပြားစုဆောင်းဖန်တီး သငျသညျအလုပျကိုရှာအသုံးပွုနိုငျကွောငျးကို tools များ။ ၏သင်တန်းသင်နှင့်အတူစကားပြောနိုင်သည်ကိုဖော်ပြခြင်းမ ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူစကားပြောရှာဖွေနေကြသူကလူ.
သင့်ရဲ့ LinkedIn ပရိုဖိုင်းကိုတကယ်ကောင်းကောင်းကြည့်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သငျသညျက MBA နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာနေနေတယ်ဆိုရင် သင်သည်သင်၏ပညာရေးနေ့စွဲခွဲထားခဲ့သည်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းရုံအံ့သြဖွယ်ထက်ပိုမိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အသေးစိတျအစက်မရှိသောကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။
ok, သင်သည်မေတ္တာတရားကိုဒူဘိုင်းဖြစ်ကြောင်း, ယခုကျော်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ရှာတွေ့ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအရပျ၏အသုံးအနှုန်းများမှာအကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ နှင့်ယဉ်ကျေးမှုလူနေမှု။ နာမည်ကြီး စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်နေရာလွတ်ယခုကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အဖွင့်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သင်ကအဝါရောင်မီးခှကျသင့်ရဲ့ဦးခေါင်း၌သက်ရောက်စေဖွင့်လှစ်သင့်ပါသည်။
လူတိုင်းသိတယ် အဘယ်ကြောင့်ဒူဘိုင်းအလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာမသာအခွန်လွတ်သည်။ သို့သော်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြီးမားသောရွေးချယ်စရာများရှိခြင်း။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ငါတို့ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက်ပိုမို 20 တထောင်အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများအားမရ။ ဤဖြစ်စဉ်အားလုံးသည်ကျွန်တော်စူပါကျယ်ပြန့်လူမှုမီဒီယာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကို အသုံးပြု. နေကြသည်သာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နယူးဧည့်သည်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှယူအေအီးမှရွေ့လျား။ ဥပမာ, တောင်အာဖရိကကနေအလုပျအတှကျဧည့်သည်များ ကျိန်းသေယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အလာပြီနေကြသည်။
အဆိုပါ အင်ဒီးယန်းများအတွက်ဒူဘိုင်း၌ကျင်လည်-ခုနှစ်တွင်အင်တာဗျူး အမြဲကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ဖွင့်ကြသည်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏မြို့တော်အမြဲငှားရမ်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ generated အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုပေါ်အများအပြားအစီရင်ခံစာများ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အပေါ်တစ်ဦးလမ်းညွှန်ပေးပါသည် ဘယ်လိုဒူဘိုင်းအတွက် Google ကအတူအလုပ်ရှာတွေ့။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အချိန်ကိုမဖြုန်းတီးပါနဲ့ ယူအေအီးတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသစ်များရယူပါ.
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ အဆိုပါအမြန်ဆုံးမှ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်စီးတီးကြီးထွားလာ! - ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ
credit Instagram ကို: https://www.instagram.com/hhshkmohd
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုကောင်းသောပေးအပ် ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက်လမ်းညွှန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရရှိနိုင်သည်။